Anteenada Mac waxaa lagu cusboonaysiiyay shaashado cusub oo cajiib ah | waxaan ka imid mac
Maalin dhawayd xaaskaygu waxay ku cabaysay jikada iyada oo taxanayaal TV ka daawanaysay. Waan imid, wixii uu daawanayay ayuu hakad geliyay, waxaana bilownay sheeko. Si lama filaan ah, waanu joojinay in aan wada hadalno waxaana jacayl u qaadnay daawashada talefishinada muuqaalada hawada sare ee buuraha saxaraha ah. Shaashadaha ayaa booday. Apple TV. Hal daqiiqo, waxaan ilownay wixii aan ka hadlaynay.
Codsiga oo wata anteenada MacOS, waxaad ku raaxaysan kartaa shaashadda Apple TV ee cajiibka ah ee Mac-gaaga, hadda waxaa la cusboonaysiiyay nooca 3.0, oo ay ku jiraan shaashadaha ugu dambeeyay ee Apple ay ku soo bandhigtay tvOS 15.
Aerial waa codsi il furan oo loogu talagalay macOS kaas oo aad ku raaxaysan karto shaashadda Apple TV ee cajiibka ah ee Mac-kaaga. Codsiga hadda waxaa loo cusboonaysiiyay nooca 3.0, kaas oo aan keenayn oo keliya shaashadaha cusub ee Apple TV. tvOS 15, laakiin sidoo kale astaamo cusub sida isdhexgalka Apple Music iyo hagaajinta kaydinta kaydinta marka loo eego noocii hore.
Laga soo bilaabo Apple TV Laga soo bilaabo jiilkii afraad wixii ka dambeeyay, aaladahani waxay leeyihiin ururinta shaashadaha loo yaqaan "Aerial". Waa muuqaallo cajiib ah oo ku dul duulaya muuqaallada cajiibka ah si tartiib tartiib ah.
Cusbooneysii ugu dambeeyay ee tvOS 15, software-ka Apple TV, shirkaddu waxay soo bandhigtay 16 shaashadaha cusub Kee baa ka cajiib badan? Waa hagaag, hadda waxay sidoo kale diyaar u yihiin Mac haddii aad rakibto Aerial 3.0.
Marka laga reebo fiidiyowyada cusub, cusbooneysiinta sanadkan waxay sidoo kale keentaa guddi cusub oo Hadda Ciyaaraya si ay ugu oggolaadaan isticmaalayaasha inay si fudud u doortaan shaashadaha ay ciyaarayaan. Waxa kale oo jira doorashooyin badan oo la heli karo si loo muujiyo saadaasha cimilada ama saacadda iyo xitaa la qabsiga Apple Music y Spotify.
Aerial 3.0 ee macOS waa gratuito, oo waxaad ka soo dejisan kartaa boggooda website-ka rasmiga ah. Wuxuu u baahan yahay Mac ku shaqeeya macOS Sierra (nooca 10.12) ama ka dib. Way mudan tahay in la rakibo. waxaa lagugu qaban doonaa daawashada shaashadaha cajiibka ah ee Apple TV.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Barnaamijyada Mac » Barnaamijyo kale oo loogu talagalay Mac » Anteenada Mac waxaa lagu cusboonaysiiyay shaashado cusub oo cajiib ah